“ဝတ်မှုံရွှေရည် ပရိသတ်များလွန်းလို့ ရှူတင်ပထမရက်မှာတောင် ဖြုံဘူးတစ်ရွာလုံးနီးပါးကြိတ်ကြိတ်တိုးအားပေးနေကြတဲ့ ဗီဒီယိုလေး” - Myannewsmedia
“ဝတ်မှုံရွှေရည် ပရိသတ်များလွန်းလို့ ရှူတင်ပထမရက်မှာတောင် ဖြုံဘူးတစ်ရွာလုံးနီးပါးကြိတ်ကြိတ်တိုးအားပေးနေကြတဲ့ ဗီဒီယိုလေး”
By SPACEPosted on July 18, 2019 July 18, 2019
ယခု လ က် တေ လာပ ရိ သတ်ေ တွြ ကာ .းမှာေ ရ ပ န်းစားေ န . တဲ့ ” ဝတ်လဲတော်ရွေပုဆိုး တန်းထိုးလို့ကြိုမယ်”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ ဇာတ်ကားမရိုက်ကူးခင်ကတည်းက ပရိသတ်တွေကအရမ်းစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါနော်။
ဇာတ်ကားမှာပါဝင်ကြတဲ့ Daung, Htoo Aung, Moh Moh Myint Aung, Aye WutYi Taung, Wut Mhone Shwe Yi, Htoo Mon, Khin Moh Moh Aye, Zaw Win Naing, Thi Yati နဲ့ အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာပါဝင်ထားကြတဲ့ ဇာတ်ကားကြီးပါနော်။
Htoo Aung, Daung နဲ့ Shwe Kit တို့ ကေ တာ့ ဇာတ် ကားရို က် ကွ င်းမ စခ င် က တည်းက ဖြုံဘူးရွာလေးကို ရောက်ရှိနေကြပြီး ဇာတ်ကားအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့လာနေကြတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးလည်းတွေ့မြင်နေရမှာပါနော်။
မြန် မာ့ အေ ငွ့  အ သက်ေ တွ ရှိ တဲ့ရြေေ မေ တာေ တာင်ေ လးမှာ ရိုးသားတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကြောင့် Shwe Kit, Htoo Aung နဲ့ Daungတို့က အရမ်းပျော်နေကြပါတယ်နော်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ “ဝတ်လဲတော်ရွေပုဆိုး တန်းထိုးလို့ကြိုမယ်”ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ ရိုက်ကွင်းစတည်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ရွာသူရွာသားတွေကတော့ ပထမဆုံးရိုက်ကွင်းမှာကြိ တ်ြ ကိ တ် . တိုးအားေ ပြး က ည့် ရှု့ေ နြ က ပြီး Shwe Kit ကတော့ ခင်နှောင်းကာရိုက်တာနဲ့လိုက်ဖက်အောင် ပြင်ဆင်ခြယ်သပြီး ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေပါပြီနော်။ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ ဝိုင်းအုံပြီးအားပေးမှုလေးကြောင့် ရိုက်ကွင်းလေးက ပိုပြီးပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းသွားပါတယ်နော်။
Source:ဘဝအားမာန် | Reference & Credit : myanmarload.com
Previous post ကိုကျင်ဝှက် စိတ်ဆိုးသွားအောင် ဆေးအကြီးကြီးထိုးလိုက်တဲ့ အောင်သော်
Next post လျှို့ဝှက်သည်းဖိုရုပ်ရှင်ကားအသစ်မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် ဆွေးနွေးနေတဲ့ Song Joong Ki